Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Fedora 17 Beefy Miracle | Site na Linux
Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Fedora 17 Beefy Miracle
Na ụbọchị ole na ole mbubreyo, ke akpatre llegó Fedora 17 na aka anyi.
Nke a ntuziaka nwụnye emere site na mbu maka newbies na ọ bụghị nke ukwuu nke na ha ka malitere n'ụwa nke Fedora Linux
Tupu anyị amalite, ka bido site na ị rụọ ọrụ ikike ndị nchịkwa:
na itinye ochichi paswọọdụ.
1 1. Melite Fedora
2 2. Tinye Fedora na Spanish
3 3. Wụnye mgbakwunye ndị ọzọ
4 4. Meziwanye yum
5 5. Wụnye onye ọkwọ ụgbọala Nvidia
6 6. Hazi Shell Gnome
7 7. Wụnye kodị ọdịyo na vidiyo
8 8. Wụnye kodeks na-ekiri DVD
9 9. Wụnye Flash
10 10. Wụnye java + java ngwa mgbakwunye
11 11. Wụnye zip, rar, wdg.
12 12. Wụnye LibreOffice na Spanish
13 13. Wụnye Mmanya
14 Yapa: ndị na-akpaghị aka
1. Melite Fedora
Mgbe ị nyechara ikike, ihe ọzọ bụ imelite sistemụ ahụ. Nke a bụ 100% akwadoro, iji zere njehie ọ bụla ma nwee ike ịwụnye ihe niile na nchịkọta kachasị ọhụrụ.
yum -y melite
2. Tinye Fedora na Spanish
Gaa na Ọrụ> Ngwa> Ntọala sistemụ> Mpaghara na Asụsụ ma họrọ Spanish.
3. Wụnye mgbakwunye ndị ọzọ
RPM Fusion bụ nke kachasị mkpa (na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu ịgbakwunye) mgbakwunye ọzọ na Fedora. Ọ na-agụnye akụkụ buru ibu nke ngwugwu nke Red Hat anaghị etinye na ndabara na nkesa ya maka ikikere ma ọ bụ ikike patent, ya mere nchekwa a dị mkpa, dịka ọmụmaatụ, wụnye multimedia playback codecs. Nke a bụ n'ihi na Fedora na-ezube ịnye ụzọ ọzọ n'efu na koodu ọnye na ọdịnaya iji mee ka ọ bụrụ n'efu na redistributable.
yum localinstall --nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release- kwụrụ ọtọ.noarch.rpm
Iji mechaa, anyị ga-emelite ọdụ anyị:
sudo yum nlele-melite
sudo yum melite
Ugbu a ọ bụrụ na anyị dị njikere ịwụnye proprietary ọkwọ ụgbọala na codecs na kọmputa anyị
4. Meziwanye yum
yum dị ka Ubuntu's apt-get. Site na ịwụnye ngwungwu ole na ole anyị ga-emezi ya ma mee ka ọ rụọ ọrụ ngwa ngwa.
yum -y wụnye yum-ngwa mgbakwunye-fastestmirror
yum -y wụnye yum-presto
yum -y wụnye yum-langpacks
5. Wụnye onye ọkwọ ụgbọala Nvidia
Rụọ ọrụ RPM Fusion repository ya na ngalaba anaghị akwụ ụgwọ n'efu (lee usoro nke atọ).
Iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala nVidia site na ebe nchekwa RPMFusion enwere iwu 3 nwere ike. Only na-agba ọsọ otu n'ime ha, ma ịmata nke ọ dị, ọ dị mkpa ka ị gụọ ozi ndị a:
akmod Ọ bụ ezigbo nhọrọ na ụzọ dị mfe iji zere nsogbu na mmelite kernel (nke a bụ nhọrọ kachasị mma n'echiche m).
kmod Ọ na-echekwa ntakịrị ohere ma ị ga - enwe nsogbu na kernel ọ bụla, yabụ na ị ga - etinyegharị ọkwọ ụgbọala ahụ na kernel ọhụrụ ọ bụla.
Ndị ọrụ nke Kernel PAE (Mgbatị ahụ okike). Ọ bụrụ na ịnọ na sistemụ 32-bit (i686) ma nwee kernel PAE ka ị nwetakwuo RAM. N'okwu ahụ, a gbakwunye -PAE na ngwugwu "kmod". Dịka ọmụmaatụ, kmod-nvidia-PAE. Nke a ga-etinye usoro kernel maka kernel PAE kama nke kernel 32-bit.
Buru n'uche na ọ bụrụ na ị bụ 32-bit system user (i686) ma ị nwere 4Gb nke RAM ma ọ bụ karịa, ikekwe ị nwere kernel PAE, yabụ jiri nhọrọ ahụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke usoro 64-bit (x64_64), n'ezie ị gaghị enwe kernel PAE, yabụ naanị m họọrọ akmod ma ọ bụ kmod.
1. Ozugbo emerechara akara ahụ, ahọpụtara m otu n'ime nhọrọ 3 ndị a:
yum wụnye akmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686
yum wụnye kmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686
Iji kmod-nvidia-PAE na PAE-kernel devel eme ihe
yum wụnye kernel-PAE-devel kmod-nvidia-PAE
2. Wepu nouveau na onyonyo initramfs.
mv / buut / initramfs - $ (uname -r) .img / buut / initramfs - $ (uname -r) -nouveau.img
dracut / buut / initramfs - $ (uname -r) .img $ (uname -r)
3. Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa.
6. Hazi Shell Gnome
Nke a nwere ike ịbụ ihe mbụ ịchọrọ ịme na fedora, cheta na ọ na-abịa na Gnome 3 Shell interface. Iji hazie ya, ọ kachasị mma ịwụnye gnome-tweak-tool iji gbanwee isiokwu, mkpụrụ edemede, wdg. Onye nchịkọta akụkọ Dconf ga-enye gị ohere ịmegharị ma hazie Fedora.
yum wụnye gnome-tweak-tool
yum wụnye dconf-nchịkọta akụkọ
7. Wụnye kodị ọdịyo na vidiyo
yum -n wụnye gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-bad-nonfree gstreamer-plugins-jọrọ njọ gstreamer-ffmpeg
8. Wụnye kodeks na-ekiri DVD
yum wụnye libdvdread libdvdnav lsdvd libdvdcss
9. Wụnye Flash
yum -n wụnye flash-ngwa mgbakwunye
10. Wụnye java + java ngwa mgbakwunye
OpenJDK, nsụgharị Java nke zuru oke maka ọtụtụ ọrụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta Java, ịnwere ike ịwụnye ụdị nke Sun Java.
yum -y wụnye java-1.7.0-openjdk
yum -y wụnye java-1.7.0-openjdk-plugin
11. Wụnye zip, rar, wdg.
yum -y wụnye unrar p7zip p7zip-plugins
12. Wụnye LibreOffice na Spanish
yum wụnye libreoffice-edemede libreoffice-calc libreoffice-kpalie libreoffice-see libreoffice-langpack-en
13. Wụnye Mmanya
yum wụnye mmanya
yum -n wụnye cabextract
I nwekwara ike wụnye Winetricks (set nke DLLs dị mkpa maka ogbugbu ụfọdụ mmemme Windows). Ozugbo arụnyere, ịnwere ike ịme ya dị ka nke a: / usr / bin / winetricks
Yapa: ndị na-akpaghị aka
Enwere ederede dị iche iche nke na-enye anyị ohere ịhazi akụkụ buru ibu nke ọrụ a ga-arụ mgbe echichi Fedora. N'ime ha, ọ bara uru ikwu Easylife y Ngwa Fedora.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Fedora 17 Beefy Miracle
Ezigbo ndu! dị nnọọ ihe m chọrọ 🙂
Zaghachi Isaí Corrales
Adanse soler dijo
Ezigbo enyi! Daalụ! O nyeere m aka nke ukwuu, m na-amalite ụwa a nke Linux
Zaghachi Adan Soler
Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe dị mfe ma na ngwa ngwa a «Fedora Utils» iji wụnye niile dị mkpa na ọdịyo na video codecs yana mmezi software si ọnụ.
/etc/yum.repos.d/fedorautils.repo && yum wụnye fedorautils »
ma ọ bụ jiri * .rpm> http://fedorautils.sourceforge.net/
Zaghachi Raúl González
Ndewo, ị gaghị enwe akwụkwọ ntuziaka maka ndị ọkwọ ụgbọala ATI nọ ebe ahụ. ekele m ekele m
I meela nke ukwuu maka ntuziaka ahụ, ana m eji Linux maka ọnwa abụọ, peeji a kacha mma enwere, ọ na-enyere aka ma mmadụ na-amụta ọtụtụ ihe banyere ụwa a magburu onwe ya nke Linux, mgbe o jiri ubuntu ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa abụọ, agbanwee m na fedora 17 na kde na dị ka ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụ distro dị ezigbo mma ma na-agbanwe agbanwe, ana m ekele gị nke ukwuu maka ntuziaka na peeji nke kachasị mma
Nzaghachi nye federico bonino
Obi dị m ụtọ na ọ bara uru maka gị!
Nke ahụ dị mma! Mmakọ! Paul.
obere oge gara aga Emechara m ịwụnye nnukwu disro a, ntuziaka gị dabara m dị ka ogwe aka 😉 mmakọ Pablo !!
ntinye nvidia ọkwọ ụgbọala anaghị arụ ọrụ, kedu ụkwụ na-adịghị mma, ga-eji aka ya mee ya
Nanị ezigbo nduzi Fedora.
Daalụ! Mmakọ! Paul.
Ezigbo ndu: dị nkenke ma na-enye aka (dịka ezigbo nduzi kwesịrị ịbụ).
I debanyere aha 10 😉
Ezigbo ndu, ihe m gha emechu ihu na fedora 17 bu na ipod aka m anaghi amata m
Zaghachi Ariel Escobar López
Zaghachi Arturo Osorio
Daalụ maka onye ndu ahụ, na nke m eziokwu bụ na enwere m afọ ojuju na Fedora 17, ọ na-adị ngwa ngwa ma na-akwụsi ike. N'okwu m, achọghị m ịwụnye Nvidia agbanyeghị na m nwere ma nyochaa na-agba ọsọ n'emeghị ihe ọ bụla. Salu 2.
Ndewo m gbalịrị ịwụnye java mana o nyere m na etinyego ya na nsụgharị ya kachasị ọhụrụ, mana mgbe m malitere ngwa nke chọrọ ngwa mgbakwunye java m ga-enwetakwa ọzọ na ngwa mgbakwunye Java etinyebeghị, gịnị ka m ga - eme?
Zaghachi na French
ọ bụ dijo
ọ dị mma ...
Zaghachi ka eddie
Ndewo enyi na oriri nke enrgia ị nwere ihe n'ihi na Fedora 17 na shei gnome na-ewe m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3 awa, ekele
Zaghachi Jenrry Soto Dextre
hello ka ị jikwaa nchapụta nke laptọọpụ gị tinye nke a ma ọ bụrụ na nyocha gị na-achọpụta ya dị ka LVSD1 tinye na ọnụ ya dị ka mgbọrọgwụ nke a: xrandr –output LVDS1 -brightness 0.5 ebe 0.5 bụ ọkwa ọkwa ncha ihuenyo.
Ndewo ndị enyi m arụnyere nke a ma ugbu a, mgbe m wụnye ihe ọ na-agwa m na njedebe na ọ nweghị, ọ na-ejikọ m na sava nke Argentina na Brazil yum-plugin-fastestmirror yum-presto yum-langpacks
ugbu a achọrọ m ihichapụ ha ma tinye ya otu ọ dị na mbụ, daalụ
Ọmarịcha blọọgụ, ọ bụrụ na inwee ọtụtụ ngwaọrụ ma ọ bụ njikọ nke mmasi, m ga-enwe ekele maka ha ma ọ bụrụ na ibipụta
Zaghachi Gustavo Nuñez
Ikenna Anyanwu dijo
M arụnyere na Fedora 17 Beefy Miracle update na mgbe rebooting igwe o yighị ka ọ ga-ebu ndị ọkwọ vidiyo ahụ. Aro ọ bụla?
Zaghachi na disqus_Y34wYThXjG
Ezigbo nkuzi !!! ekele: D!
Zaghachi César Gabriel Guaimás Rosado
Nweghị ike ịgbatị ọkwa gị site na ntinye nke ndị ọkwọ ụgbọala ATI? Enwebeghị m ike kemgbe ọ na-emebi usoro m mgbe m tinyere ndị ọkwọ ụgbọala na m na-ebudata na isi akwụkwọ ATI.
Zaghachi José Miguel Morales Martínez
Ivan Reyes kwuru dijo
Enwetara m njehie a: ihe oyiyi disk disk adịghịzi mma
mgbe m na-agba ọsọ yum -y update Amaghị m ihe kpatara ya.
Zaghachi Ivan Reyes
Anyị ga-ebipụta ha ... 🙂
Olee otú Iji Fedora: Wụnye, Chọọ na Wepụ ngwa ihe osise (GPK-Application and Apper)
Iji VIM: Nkuzi nkuzi.